युनिर्भसल प्रमाण पत्र सहित हङकङमा ग्राण्ड प्रिमियर हुँदै ब्लाईन्ड रक्स ! - Nepali Cinema News
Home > Nepali > युनिर्भसल प्रमाण पत्र सहित हङकङमा ग्राण्ड प्रिमियर हुँदै ब्लाईन्ड रक्स !
युनिर्भसल प्रमाण पत्र सहित हङकङमा ग्राण्ड प्रिमियर हुँदै ब्लाईन्ड रक्स !
February 16, 2018 Nepali
पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रहरु पनि नेपाल बाहिरका अन्य देशहरुमा त्यहाँको नियम कानुन बमोजीम जाँचपास गरेर मात्रै प्रर्दशन गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । यो भन्दा पहिले केही औंलामा गन्न मिल्ने बाहेक अधिकांस नेपाली चलचित्रहरु बिदेशमा जाँचपास नगरीकन लुकिछीपी सामान्य रेष्टुरेन्टहरुमा टिभिको पर्दामा देखाईने गर्दथे ।
दृश्टी बिहिन सृष्टि केसीको जीवनमाथि बनेको बायोपिक चलचित्र ब्लाइन्ड रक्सले हंङकङमा जाँचपास गराएर त्यहाँको नियम कानुन बमोजीम युनिर्भसल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सफल भएको छ । १ घण्टा ४८ मिनेट लम्बाई भएको यो चलचित्रको हङकङमा नेपाली मिती अनुसार फागुन ६ गते ग्राण्ड प्रिमियर हुँदैछ ।
यो प्रिमियरमा सहभागी हुनको लागी निर्माता निकेश लिम्बु लण्डनबाट हङकङ प्रस्थान गरिसकेका छन् । फागुन १८ गतेबाट नेपालमा प्रर्दशन हुन लागेको यो चलचित्रको निर्देशन मिलन चाम्सले गरेका हुन्, भने अभिनेत्री बेनिशा हमालले सृष्टि केसीको भुमिकामा अभिनय गरेकी छिन् ।